Abuunaa Gindabarat - Wikipedia
Abuunaa Gindabarat aanolee godina Shawaa Dhihaa keessaa tokko. Aanaan Abuunaa Gindabarat kan argamtu gara kaaba godinichatti yoo ta,u duraan aanaa Gindabarat jala turte. Aanaan kun karaa Kaabaa Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Shawaa Kaabaatiin, karaa bahaa aanaa Meettaa Roobiitiin, karaa kibbaa aanaa Jalduutin, karaa dhihaa immoo aanaa Gindabaratiin daangeffamti. Bulchiinsi aanaa kanaa magaalaa xiqqoo Bakkee Qalaaxee keessatti argama.
Aanaan kun walumaa galatti ganda baadiyyaa 43 fi ganda magaalaa 1 qaba. Ballinni lafa aanaa kanaa km2 135.25 ykn heektaara 135875.41. Lafti ol ka'aan aanaa kanaa meetira 2064 yoo ta'u lafti gadi bu'aan immoo meetira 1000 ta'a.
Akka lakkoofsa ummataa bara 2007tti, baayyinnii ummata aanaa kanaa 109,545 ta'a.
Abuna Gindeberet Woreda's Profile
Geohive, Census Results of Ethiopia
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Abuunaa_Gindabarat&oldid=31014" irraa kan fudhatame
Last edited on 18 Muddee 2018, at 06:24
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 18 Muddee 2018, sa'aa 06:24 irratti.